Filtrer les éléments par date : mercredi, 15 juillet 2020
mercredi, 15 juillet 2020 22:55
Antaninarenina: Tonga ny pompier avy eny Ivato
Mihamafy ny afo manodidina ny ONE.
Efa tonga ny pompier avy eny Ivato manampy ny pompier CUA.
Antaninarenina: Mirehitra ny foiben’ny Office National pour l’Environnement
Lelafo manaka-danitra sy setroka be niainga avy eo Antaninarenina – Antananarivo no nanaitra ny mponin’Antananarivo tamin’ny valo ora sy sasan alina io. Mirehitra ny foiben’ny Office National pour l’Environnement na ONE, izay rafitra mamoaka ny « permis environnemental », iray amin’ireo taratasy ilaina mialoha ny hisokafan’ny orinasa na koa fitrandrahana harena ankibon’ny tany…
Kamiao iray no tra-tehaky ny ekipan’ny CIREDD Moramanga nitondra hazoala tsy ara-dalana miisa 285 ny alin’ny 12 jolay lasa teo tao Amboniarenana ao amin’ny Kaominina Ambohibary-Distrikan’i Moramanga.
Hazoala ao amin’ny faritr’ala manodidina ny orinasa Ambatovy, Kaominina Andasibe no alain’izy ireo. Mitohy ny fanadihadiana mba hanatrarana ireo rehetra voakasik’ity raharaha ity.
Ho fanajana ireo fepetra fisorohana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus anatin’izao hamehana ara-pahasalamana izao dia nanapa-kevitra ny mpitantana ny orinasa Secren Antsiranana fa handefa « congé payé » ny ankamaroan’ny mpiasa ary hiroso amin’ny « service minimum » manomboka rahampitso.
Ampiharina avokoa ireo fepetra ara-pahasalamana, arotava, fanadiovana matetika ny tanana, fakana maripàna ny mpiasa isaky ny miditra miasa, fanadiovana ny toeram-piasana, famendrahana fanafody.
Raha 700 ireo mpiasa ankehitriny, dia ny 200 ihany sisa no manao ny « service minimum »
Misy sambo malagasy iray, AMORY, amboarina ao amin’izao.
mercredi, 15 juillet 2020 13:46
Antanambao Ambary – Mandoto: Nanaovan’ny mpitandro filaminana bemidina ireo nikasa hanao « havoria »
Fianakaviana iray ao Andranomainty, Kaominina Antanambao Ambary distrika Mandoto no heno fa nikasa ny hanao « havoria » ny 14 jolay 2020. Nanaovan’ny mpitandro ny filaminana avy amin’ny Zandarimaria sy Polisim-pirenena bemidina tao an-toerana ilay fianakaviana, nanakana ny fikasany hanatanteraka izany lanonana mitarika fitangoronana izany, izay voarara anatin’izao vanimpotoana fahamehana ara-pahasalamana izao.
mercredi, 15 juillet 2020 13:39
Kamanja Anjozorobe: Faty hita tao anaty rano
Nifatotra tao an-damosina ny tanany roa, nihohoka avy eo notsindriana vato no nahitana ny faty. Lehilahy tokony ho 38 taona ity farany. Nanokatra fanadihadiana ny Zandary ao Anjozorobe hamantarana ny antony sy ny tompon’antoka amin’izao heloka bevava izao.
Manao ny andrana amin'ny famokarana herinaratra izay namboarin'izy ireo ny eny anivon'ny Orinasa miaramila (UMM) Moramanga. Ny trano fonenan'ireo mpiasa eny an-toerana moa no nanaovana ny andrana.
Tanjona ny hanamora ny asa sy ny fifandraisana amin'izao andro mafy amin'ny ady amin'ny Covid-19 izao, ahafahana miaro ny vahoaka sy ny fananany.
Faritra miisa sivy no mamokatra lavanila eto Madagasikara. Saika amin’ity 15 jolay ity avokoa no hisokatra ny taom-piotazana amin’ireo faritra ireo araka ny voafaritra amin’ny Didim-pitondrana iraisan’ny ministera laharana faha-9734/2020 nivoaka ny 20 may 2020, niarahan’ny ministeran’ny Fambolena sy fiompiana ary ny jono miaraka tamin’ny ministeran’ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana.
Voakasik’io Didim-pitondrana io ny Faritra Alaotra Mangoro, Analanjirofo (littoral), Atsimo Atsinanana, Atsinanana, DIANA (haut Sambirano), SAVA (littoral), Vatovavy Fitovinany ary Sofia (Befandriana/Bealanana/Mandritsara) zone basse.
« Roapolo andro katroka androany aho no niady tamin’ny Covid-19 », hoy i Paul Rabary tao amin’ny pejiny facebook. « Ady mafy, ady tena sarotra, ady mangotraka saika namoizako ny aiko. Efa imbetsaka no sempotra sy tsy avy niaina intsony. Efa nisy fotoana nametra-beloma ny tapaka sy namana rehetra. Ary efa vonona ny hilavo lefona ny vatana sy ny saina fa nitaky ny fialantsasatra amin’izay », hoy hatrany ity minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha ity.
« Nataon’ny Covid-19 marenina tanteraka ny sofiko ilany. Koa aza omena tsiny aho raha toa ka tsy maheno tsara intsony rehefa miresaka mivantana aminareo. Ary mbola tsy tena salama tanteraka aho manoratra ho anareo fa mbola mila manao “rééducation” ny avokavoko izay nitondra takaitra koa ».